Chii chinonzi Google Data Studio - NewGenApps
analytics, Big Data Analytics, Google, Google Analytics, Google Cloud Platform, newgenapps
Chii chinonzi Google Data Studio
Wanga uchinetseka here kuti Google ichaburitsa riini dhibhodhi raunogona kushandisa kutaurirana kubudirira kwemishandirapamwe nevatengi vako? Tarisa kwete kumberi kupfuura iyo Data Studio. Kusiyana Google Analytics, iyo Google Data Studio inokutendera iwe kuti uve neanopfuura gumi nemaviri majeti akaomeswa paunenge uchigadzira yako mareport. Muchokwadi, iwe unogona kuwedzera semishumo yakawanda ku studio sezvaungade. Asi tisati tapinda mune izvo… ngatitaurei nezve izvo iyo Google Data Studio, mashandisiro aungaishandisa, uye nezvazvinonyatso shandira.
Chii chinonzi Google Data Studio?
Iyo Google Data Studio ndeye Enterprise mhinduro iyo inobvumidza vashambadziri kuti vagadzire yavo yega tsika mishumo iyo inotumira chete iyo ruzivo rwakakodzera kumutengi. Kune avo vanoshanda nemaSMB, izvi zvakakosha. Inokunda dambudziko rekare re: Ndiri kutarisa chii?
Google Data Studio inosanganisirwa mu Google 360 suite, asi kana usiri pane iyo package- usanetseka! Google ichakubvumidza iwe mashanu akasiyana tsika mishumo usati wakukumbira iwe kukwidziridza pasuru yako. Iyi inzira yakanaka yekuyedza chishandiso usati waisa mari mune yakakura Gsuite kana Google Enterprise pakiti.
Zvakare, mabhizinesi madiki uye vashambadzi vasina kuita sarudzo pa software yavo yekuzivisa vanogona kushandisa Google Data Studio kushanda nedata ravari kutogamuchira kubva Google Analytics.
Mashandisiro aungaita Google Data Studio
Sezvatataura pamusoro, Google Analytics haisati yagara iri chishandiso chine hushamwari nguva dzose. Mamaneja ekushambadzira uye varidzi vemabhizinesi zvakafanana vakagara vachizviwana vachinetseka: Chii chandinofanirwa kutora kubva pane izvi? Mutengi wangu achanzwisisa here ruzivo urwu? Kazhinji kazhinji kwete, iyi mibvunzo inorwadza inotungamira vashambadziri kutendeukira kune zvimwe zvishandiso kuti vataure kubudirira kwe Masoko ekutsvaga kune vatengi vavo. Google yakazviziva izvi uye yakagadzira iyo Dhata Studio: Ipuratifomu iyo iwe yaunogona kugadzira tsika mishumo kune vako vatengi
Google Data Studio inokutendera ku…
- Aggregate data kubva kuAnalytics. Izvi zvinoda nyore kubaya bhatani, uye moyo murefu wekuti data riunganidzwe.
- Aggregate data kubva kuFacebook nemamwe evanhu vezvenhau migero. Izvi zvinoitwa kuburikidza nekubatanidzwa. Unogona kuwana rairo pano.
- Brand (kana chena chitaridzi) yako mishumo nemako marogo, mavara, uye mafonti. Izvi zvinonyanya kubatsira kumakambani anoda kupa vatengi vavo mushumo wakashambadzirwa.
-Kugadziridza-otomatiki kubva kunhoroondo dhata- kana sosi yovandudzwa saizvozvo nemishumo yako.
Zvirinani, kana iwe ukatanga kupinda muGoogle Data Studio pane yekudyidzana dzidziso iyo ichakubatsira iwe kumisikidza yako yekutanga tsika mishumo. Kana iwe uchiri kurasikirwa, tungamira kumusoro kune Youtube. Google yakapawo ruzivo rwekuraira pane chero chinodiwa cheGoogle chigadzirwa (Youtube). Kana iwe uchiri kuda imwe rubatsiro rwakawanda, iwe unogona kuwana data masayendisiti pane ese mapuratifomu kubva kuFacebook kuenda kuUpwork kuti ikubatsire iwe kutenderera.
Google Data Studio yakanakira
Kune vashambadziri uye vezvemabhizimusi nyanzvi zvakafanana, kune akawanda maturusi anogona kupa zvinopfuura data studio. Google Data Studio chishandiso chakakura chevashambadziri nemaneja zvakafanana avo vari kutsvaga mhinduro yemubatanidzwa- kana kuwana zvakawanda kubva kuAnalytics. Isu tinokurudzira kuishandisa seyemukati mekutaurisa system iyo inochengeta vashambadziri muchikwata chako zvakaringana asi kunamatira kumishumo 'yakanaka' yekuzivisa kwevatengi kunze kwekunge iwe uchida kutora kudzidza chikuva chitsva.
Kune avo vari kukwikwidza kudhara kana vasina kuzvipira kuhurongwa hwekuzivisa izvozvi, Google Data Studio isarudzo yakanaka (kunyanya kana iwe uri kutobhadhara izere neGoogle Enterprise pasuru).
Uchishandisa Google Data Studio yekuzivisa
Kana iwe uchitova chiuno kushandisa zvigadzirwa zveGoogle iwe kana vako vatengi, unogona kunyatso simbisa simba reichi chishandiso chitsva. Nokubatanidza yako GSC uye Analytics account, iwe unogona kugadzira inowirirana mishumo iyo inogadziridza seyako dhata yekuvandudza. Chaizvoizvo, idzi nhoroondo dzinounza yako Google Analytics uye Google Search Console kugadzira masitayera emitambo anoomesa kushandisa yako data.
Iwe unogona kutora kubva kumatemplate avanopa, kana iwe unogona kugadzira yako yega template kubva kune anowanikwa ma module uye masitaera. Iyi mishumo yakafanana chaizvo nekutaridzika uye kunzwa kwesoftware inodhura seSEMrush neAhrefs, asi zviri mahara.
Chii chiri paGoogle Data Studio inoshuma
Google Data Studio inokupa iwe rakasiyana data kubva kwakasiyana masosi iwe aunosangana nawo papuratifomu. Iwe unogona kubatanidza chero dhata reGoogle chigadzirwa mune ino chikuva, asi pane matani echitatu-bato kunyorera iwe waunogona kubatanidza mupuratifomu futi.
Iti iwe une yakakura kushamwaridzana inotevera paYouTube, unogona kubatanidza iyo data muchikuva. Iwe uri mukuru Twitter influencer anotarisa kuti unzwisise ako traffic manhamba? Iwe unogona kubatanidza izvo muData Studio futi. Zvese-mune-zvese, kune zana nemakumi mapfumbamwe nematanhatu emashandisirwo emaapplication aunokwanisa kubatanidza kuData Studio uye nekukweva data kubva kune rako rekuzivisa. Iwo maapplication emumwe wake anosanganisira Adobe, Amazon, eBay, Facebook, Google Analytics, Paypal, Hubspot, Pinterest, Twilio pakati pemamwe mapuratifomu.
Data Studio inoshanda sei
Data studio inoshandisa yako mhenyu data uye inounza zvese pamwechete munzvimbo imwechete. Paunopinda muStudio, ichakukumbira kuti upinde muakaunti yako yeGoogle. Mushure mekutambira mazwi uye mamiriro ekushandisa sevhisi, iwe unozokwaziswa neisina chinhu canvas ine sarudzo dzemamodule padivi. Iyo yekutanga system inouya yakatakurwa pamwe neako mabhesiki seYouTube, Google Analytics, Tsvaga Console, nezvimwe. Iko zvakare kune bhatani pazasi peiyo kurudyi sidebar iyo inoita kuti iwe uwedzere chero dhata kubva kune wechitatu-bato kunyorera inosanganisirwa mune yavo yevanodanana runyorwa.
Paunorodha module yega yega pachivharo chisina chinhu, sisitimu yacho inokukumbira kuti upinde mumaakaundi ako kuti ubatanidze iyo data kuburikidza nekusimbisa. Paunenge iwe watopinda mune yako application, iwe unogadza iyo block kuratidza iyo ruzivo iwe yaunoda kuwona pamushumo.
Paunenge iwe wapedza zvese kuwedzera zvaunoshandisa zvaunoda zvechirevo chako muData Studio, unogona kuzvigadzirisazve kuratidza iyo data nenzira yaunoda kuti uione. Heino template yechitoro Google Search Console Report iyo inouya yakatakurwa muaccount yako yeData Studio account.
Kuburitsa Google Data Studio
Iyo Data Studio inzira yakanaka yekuvhura musuwo wekuwedzera uye kupedzisa kumhan'ara kwezvikwata zvako. Inokupa iwe kugona kuburitsa yakatarwa mishumo nezvose zvaunoda munzvimbo imwechete. Iwe unogona kuvandudza mishumo yakanangana nekutengesa iyo inonyatsoratidza ekushandura epamusoro ma URL kubva ku analytics uye uone kana zvigadzirwa zvako zvine chekuita neyako yazvino email kushambadzira mushandirapamwe kubva kuemail chimp zvese kubva kune imwechete skrini. Ichi chishandiso chichava chinoshamisa chemukati chishandiso chishandiso icho chero bhizinesi rine huvepo hwewebhu hunogona kushandisa. Isu tese tinoziva kukosha kwechokwadi kuzivisa kungave kune rako ramangwana kubudirira, saka zvinongonzwisisika kusunga kugona kuzivisa mhenyu data kana iwe uchiita ako mareport.
Kana iwe uchiri kushamisika kana uchigona chaizvo kushandisa Google Data Studio, zviyedze. Iko hakuna chimwe chinotaurira kunze kwekubatana-nekubatana nechigadzirwa. Ukangotanga kuona mukana wekubatanidza data rako, uchaona kukosha kwayo. Kekutanga nguva patakaona zvinogona kuitwa neData Studio, pfungwa dzedu dzakatanga kumhanya pamamirioni nzira dzaungashandise chishandiso ichi chitsva.
Iwe une chero ruzivo neGoogle Data Studio? Tiudze mashandisiro auri kuita iri dashibhodhi kuita mishumo kubva pane yako yakawanda data.
4 Nzira Blockchain Technology Matters
Kunzwisisa Blockchain: Nekuti kunzwisisa kuti zvakakosha sei kuona iyo ...
“NdiMATLAB, ndinogona kunyora nekugadzirisa kugona kutsva nekukurumidza zvakanyanya kupfuura nemimwe mitauro. Kucheka kukura kwedu ...
Hapasisinazve Dzokororo Mafaira PaMac: Tarisa uone Maitiro Ekuchengetedza Iyo Sisitimu Yemahara
Mar 17 | macOS, newgenapps, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Dzokororo mafaera makopi emagwaro ako ekutanga. Izvi zvinogona kugadzirwa ne ...